Abakhenkethi baseRussia babanjelwe eTurkey ngokuqala imililo yasendle yaseAntalya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » Abakhenkethi baseRussia babanjelwe eTurkey ngokuqala imililo yasendle yaseAntalya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
Abakhenkethi baseRussia babanjiwe eTurkey ngokuqala umlilo wehlathi.
Abakhenkethi baseRashiya barhanelwa ngokubasa umlilo ongajongiyo oqhambuke kufutshane nendawo edumileyo yabakhenkethi baseTurkey.
Umlilo wasendle usenokuba waqalwa ngabakhenkethi baseRashiya ababehamba ngendlela edumileyo.
Abakhenkethi baseRashiya bavalelwa ngexesha lophando lwangaphambili lweemeko zeso siganeko.
Abacimi-mlilo baseTurkey batyhalelwa kwimida ngelixa besilwa nemililo yasehlotyeni yalo nyaka.
NgoMvulo, amapolisa aseTurkey abambe iqela labakhenkethi baseRussia Antalya, emva kokuba kuye kwabakho umlilo kummandla oshinyeneyo wemithi emaphandleni.
Ngokomthetho wasekuhlaleni, abemi baseRashiya abasixhenxe barhaneleka ngokuqalisa imililo yasendle ngempazamo eqhambuke kufutshane nendawo ethandwa ngabakhenkethi.
Abasemagunyeni basekhaya kwindawo yase-Çağlarca babanga ukuba umlilo wangoMgqibelo unokuba uqalwe ngumlilo wenkampu owamiselwa liqela labakhenkethi baseRussia ababehamba ngendlela edumileyo yeLycian Way.
Ngokutsho kwesithethi se-diplomatic mission yaseRashiya kwi Antalya, inkundla yenza isigqibo sokubamba abakhenkethi baseRashiya ngexesha lophando lwangaphambili lweemeko zeso siganeko.
Abanye abantu abathandathu nabo babanjwa ikarikuni ngo-Agasti, ngokurhanelwa ngokutshisa iindawo zamahlathi, ngeli xesha ngezityholo zokutshisa. Ngenene amapolisa kuye kwafuneka angenelele ukukhusela abarhanelwa, ababesele baleqwa ngabantu basekuhlaleni abanomsindo.
Abanye abantu abathathu bakhe babanjwa eBodrum emva kokuba amapolisa ebanga ukuba babanjwe bejula iimpundu zecuba ngefestile yemoto ngelixa beqhuba kwihlathi elomileyo.
Abacimi-mlilo baseTurkey baye batyhalelwa kwimida ngexesha lasehlotyeni lokulwa nemililo yasendle, uninzi lwabo besoyikisa iindawo ezithandwa ngabakhenkethi ezijikeleze iAntalya naseMugla.
Kwi107 ikarikuni Imililo efuna amanyathelo angxamisekileyo ngabacimi-mlilo. Amakhulu abantu abonzakele ngenxa yokusasazeka komlilo kwaye amawaka akhutshiwe kumakhaya abo.